Accueil > Gazetin'ny nosy > Antenimierampirenena: Miala any ny malety matavy!
Antenimierampirenena: Miala any ny malety matavy!
Hiadian-kevitra eo anoloan’ny fivoriamben’ny Solombavambahoaka, izay azon’ny besinimaro hatrehina anio talata, ilay rijan-teny mirakitra ny tolo-dalàna avy amin’ny fitondram-panjakana, momba ny raharaham-pifidianana (projet de code electoral). Efa hatramin’ny zoma no nanohy nivory manokana ivelan’ny lapan’i Tsimbazaza ireo solombava mpanohana ny fitondram-panjakana. Teny amin’ny trano fandraisam-bahinin’i “Paon d’Or” eny Mandrosoa Ivato no nivorian’izy ireo, nikaton-trano. Niaraka tamin’ny olon’ny fitondrana.
Ny tetika hampahombiazana ny fankatoavana an’io tolo-dalàna io no nodinihana tao, hoy ny loharanom-baovao. Isan’ny tetika hirosoan’ireo mpiara-dia amin’ny fitondrana tamin’izany ny hoe “hakana vitsivitsy ireo fanitsiana nankatoavin’ny asam-baomiera, saingy ireo fanitsiana maivana fa tsy ny goavana, mba hanakonana ny mason’ny vahoaka hoe efa niroso tamin’ny fanekena ny hevitra ny olona ivelan’ny fitondrana ny maro an’isa”.
Ho fampahombiazana an’izany àry dia tsy maintsy “karakaraina amin’ny malety” ny solombava. Kolikoly avo lenta io e!
Re omaly fa nidina ny baiko sy ny jadona fa ny minisitra tsirairay avy, raha mbola te hijanona amin’ny toerany dia tsy maintsy manao tan-tsoroka amin’ny fitondrana ka manome vola hanampenana ny masom-panahin’ireo solombava.
Manahy mantsy ny any an-dapa fa mety hahazo ny fankatoavan’ny solombavambahoaka maro an’isa ireo fanitsiana miisa 87 sy izay mbola hoentin’ny solombava eo anoloan’izao fivoriambe hatao anio talata izao, ka handamoka eo ny tetika rehetra tiana hanodinana sy hanovana ny voka-pifidianana mba hampandresena ny kandidam-panjakana.
Noho izany, ny maro an’isa amin’ny solombavambahoaka mihitsy no tetehin’ny any an-dapa mba ho voafehiny amin’ny alalan’ny “kolikoly avo lenta”.
Dia hiarahantsika mahita eo ny ho tohin’izany, satria hatreto dia tsy misy ihambahambana ny ilazana fa mikotrika korontana mivaivay ny fitondrana mba hamotehana ny firenena raha toa ka ny hevitra marina sy rariny mampangetaheta ny maro no mahazo vahana eny Tsimbazaza sy Anosikely eny amin’ny alalan’ity rijan-teny momba ny lalàna fehizoron’ny raharaham-pifidianana ity.